China na ulo oru 4-Ply Synthetic Roofing Roofting ShiningPlast
ShiningPlast 4-Ply Synthetic Roofing Rooti Underlayment na-enye nchebe dị mma maka ụlọ gị bara uru, nwekwara ndị na-arụ ọrụ na ya. Anyị nakweere teknụzụ ọhụrụ maka antiskid na ebumnuche siri ike nke na-eme ka njiri mara mma na njigide dị mma na ndị na-akpata ya.
Ibu ibu: 80 ~ 150 gsm
Usoro: Akwa 4 - SBPP + LDPP + HDPP + LDPP
Ikike: Jet loom na mmiri na loom okirikiri
Agba: Dị ka ndị ahịa rịọrọ gụnyere SBPP
Size: 48 '' X 250 '42' 'X 250'
Obibi akwụkwọ: Ihe ruru 4 agba
: Nrapado onwe gi bu nhọrọ diri gi
Ọ bụghị sọsọ dị nkpuchi mkpuchi ihe mkpuchi 4-layer, site na uru ebumpụta ụwa nke ndị na-emepụta SBPP na PP / PE. Anyị na-enyere aka n'ụkpụrụ pụrụ iche / ịdabere na akwa mkpuchi SBPP iji mee ka akụkụ ahụ dịkwuo elu ma site na nke a, iji mee ka njiri mara nke ọma.
Anyị na-ejikwa klọọkụ ekpuchie pụrụ iche na ihe mgbakwunye pụrụ iche iji gbalite esemokwu dị n'etiti oghere ụlọ na akwa. Anyị ga-eme akụkụ abụọ nke antideid nke mkpuchi ahụ.
Anigha nwuputa nke inwuchu dika ihe eji enyo ihe bu ihe ozo di nkpa nye ndi na ekesa ihe. Anyị emeela ka ụzọ a na-ekwe mma jiri ya na ụgbọ mmiri ọdịnala mere otu iji hụ na ngwa agha na akwa ahụ ruru ọkwa ọhụrụ.
Ọgwụ UV dị elu maka akwa ọ bụla na-eme ka ihe mkpuchi anyị dị mma nke ọma n'okpuru mkpughe UV ogologo oge.
1. Tight kechie na mpempe akwụkwọ ma ọ bụ PP cores.
2. Ihe eji eme ihe puru iche iji jide ya jigide n’oge mbufe
3. palletization pụrụ iche (US ma ọ bụ EN Standard Pallets).
4. Sọsiri ya ike na ihe mkpuchi PE.
• Na-adịgide adịgide: Underingment ShiningPlast siri ike ma na-adigide. Karịsịa o nwere ike akwa akwa. Ọ ga - eme ka eriri roora jiri akụkụ adọka adọpụ pụọ.
• Dị fechaa: ShiningPlast Sịntetik Underlayment nwere ngwongwo dị mfe nke na-eme ka ọ dịrị ya mfe iburu ndị roogo.
• Antiskid: Designedkpụrụ pụrụ iche eji arụ ọrụ / embossment na SBPP oyi akwa iji mee ka akụkụ ahụ dịkwuo elu. Anyị na-ejikwa klọọkụ ekpuchie pụrụ iche na ihe mgbakwunye pụrụ iche iji gbalite esemokwu dị n'etiti oghere ụlọ na akwa. Anyị na-eme akụkụ abụọ nke ọgwụ mkpuchi ahụ dị ka nsogbu gị.
• Na-eguzogide Weather: Ebe ọ bụ na mmalite nke yarn extrusion, anyị na-amalite ilekọta ụmụ nwanyị ọ bụla site na nnukwu annealing na ịbịaru oke, anyị na-ejikwa ha site na looms dị elu, site na T-Die Coating ruo mgbe ọ gwụchara, na ihe a niile ga-ahụ na ọ dị mma ịkwatu ọnọdụ. , ezigbo tensile / akwa na mbibi dị mma. A ga-enwetakwa nchebe gị ga-adị nchebe n'oge ikuku siri ike ma ọ bụ ihu igwe adịghị mma.
• Gosi Gosi: Ọbụghị naanị ebe a na-agbatị agbacha agbacha, ike imegharị ShiningPlast ga-abụ ihe mgbapụta site na ike dọkpụrụ.
• Mgbapụta mmiri: N'adịghị ka ọtụtụ oghere na oghere dị n'etiti teepu, ShiningPlast kachasị mma na -eme akwa na-eme ka inch ọ bụla nke akwa ahụ dị mmiri.
• UV na-eguzogide: Anyị jiri ọgwụgwọ UV na njigide ya kachasị mma iji hụ na njigide ya mgbe ekpughere UV ogologo oge.
• A na-enwe Peel na Nrapado Stick
Ngwunye egwu gbazee di elu na-enye ndi ahia anyi ohere ozo / oru nke ya bu nnabata onwe ya. Enwere ike hazie igwe mmado ahụ dịka arịrịọ gị.
Nke gara aga: 3-Ply House Kechie
Osote: Light Duty Poly Tarp